Umkhakha Wezokuphepha ube yinhlangano yobuhlakani bokufakelwa
I-Artificial Intelligence kufanele idlule kwidatha, ubuchwepheshe, imikhiqizo, imijikelezo emithathu ukuqedela inqubo yokufaka. Ku-Google "Injini Yokusesha" njengoba ...
I-Artificial Intelligence kufanele idlule kwidatha, ubuchwepheshe, imikhiqizo, imijikelezo emithathu ukuqedela inqubo yokufaka. KuGoogle"Injini yokusesha" Njengesibonelo, umkhiqizo uyinjini yokusesha yeWebhu, ubuchwepheshe yi-algorithm ukufezekisa ama-linkings amakhasi, idatha yenziwa ngumsebenzisi ichofoza amazinga ekhasi. Emkhakheni wezokuphepha, ukuvula isayensi nobuchwepheshe"Injini yokufunda ejulile", ngokwesibonelo, uma umkhiqizo uhlakaniphile wefu lokubuka, ubuchwepheshe ukujula kwe-algorithm yokufunda, imininingwane imakwe idatha yesithombe. Ngemuva kwalokho, iplatifomu yezobunhloli ye-Artificial Intelligence iyidatha nobuchwepheshe nge-powerpun ngaphandle komkhiqizo, inqubo yohlelo lokusebenza lomkhiqizo ikhiqize idatha entsha, ivelise futhi yajulisa inqubo yokufunda. Okungukuthi, imikhiqizo, ubuchwepheshe kanye nemininingwane ukwakha ubuchwepheshe obuhle kakhulu obuvaliwe ubuchwepheshe obuvaliwe, umgomo wokugcina ukwakha umshini wokusebenza komshini, ukuze kube ngabantu"qonda" na-"Cabanga." Ukuze umshini unomsebenzi ofanayo wokubuka njengomuntu, ukuze uzuze ukutholwa okuhlukahlukene, ukwahlulela, ukuqashelwa, ukukalwa neminye imisebenzi.
1. Ukusetshenziswa kwezentengiso kokuqashelwa kobuso
Njengobuchwepheshe abamele ubuhlakani bokufakelwa, amandla okusebenzisa umkhiqizo kanye nokuhweba kubaluleke kakhulu. Esicini sokunemba nokuphepha, isilinganiso sokuqashelwa esingamanga esingaphansi kwezinkulungwane eziyikhulu senani lokunemba sitholakala ngokusebenzisa ubuchwepheshe bobuchwepheshe bokuqashelwa kobuso njengesethenjwa, futhi izinga lokudlulayo lingaphezulu kwamaphesenti angama-95. Ezingeni lokuphepha, eliphakeme kuneleveli yezokuphepha yokuqashelwa kweminwe, futhi akukho zidingo ezikhethekile zokusekelwa kwehabhu, zikhuthazwe kalula.
Emkhakheni wokusetshenziswa kobuchwepheshe bokuqashelwa kobuso, sekubonile umsebenzi webhizinisi lokhonkolo esakhiweni sezentengiselwano, futhi kwasiza umthengisi ukuthi aqaphele ukuhlaziywa okunembile kokugeleza komgibeli kusuka"izibalo zokubonisa ukuma kwendaba" kwa-"izwi" kwa-"ukuziphatha", ukuthola okuningi ngokuhlaziywa kombono womshini. I-Multi-Line Data Disension, ngokuhlaziywa kwedatha enkulu ukuqondisa ibhizinisi eliqondile lokumaketha, futhi ugqugquzele imboni yezitolo kusuka kumikhiqizo efanayo nasezisekelweni kubo bonke abantu, ibheke kumkhiqizo ofanayo, oya kumuntu othize ukuze ushintshe.
Ngasikhathi sinye, ukusetshenziswa kobuchwepheshe bokuqashelwa kobuso kumabhizinisi, amapaki aletha isipiliyoni esihlakaniphile sokuphatha. Njengomkhiqizo wezobuchwepheshe bokubona ubuso, kumasango obona ubuso, ukulawulwa kokufinyelela, inani lababekhona engqungqutheleni nezinye izigcawu zendabuko ziletha ukusebenza kahle kokuphatha kanye nokwenza lula.
Ukusetshenziswa kokuqashelwa kobuso embonini yezokuphepha
Imboni Yezokuphepha Kwendabuko ekubhekeni kwevidiyo esekelwe ku-Video Revillence-based, kwidatha yevidiyo enkulu engahleliwe, ukusetshenziswa kwedatha ehlelekile kunamathuba amaningi. Ubuchwepheshe be-Kuang ngenxa yobuchwepheshe bezobuchwepheshe bokufakelwa embonini yezokuphepha yendabuko, vumela umshini uqonde umhlaba kunokuba usakaze ividiyo yevidiyo, ukuze imboni yendabuko isebenze kusebenze inani elithe xaxa.
Ubuchwepheshe bokuqashelwa kobuso budluliselwe ezigabeni ze-labulatory algorithm, isoftware SDK esiteji, isigaba soMkhiqizo Oyedwa, Isigaba Sokulungiselela Isiteji, nesigaba esihlanganisiwe seplatform, ngokususelwa ekuhlaziyweni kwe-axion axision of ubuso Njengamanje, izinkampani eziningi zisesigabeni se-software SDK nesigaba somkhiqizo owodwa, lesi sigaba empeleni aIsimo esingemademoni Isiteji, isayensi evulekile kanye nobuchwepheshe esigabeni somkhiqizo esisodwa, isigaba sesixazululo nesiteji esihlanganisiwe seplatform, izindawo ezikhona njengamanje izindawo ze-pan-malion, Pan-Commerce and PAN-Security. Izinhlelo Zokuphepha zePan lapho kunezicelo ezimbili ngesikhathi seNgqungquthela ye-G20 e-Hangzhou, eyodwa edeskini langaphambili lasehhotela, ngokusebenzisa indlu'sxubha ukuqinisekisa ukuthi ikhadi lobunikazi lizofanisa; Okunye kudlula abasebenzi abangaphansi komhlaba bapholen, bakhombe iziboshwa esixukwini kanye nama-molecule asolisayo.
PHAMBI Ungakwazi yini ukutshela umehluko phakathi kwamakhamera amaningi asendleleni?
Ungakuvimbela kanjani ukweba ekhaya lakho OLANDELAYO